CPC နှစ် ၁၀၀ ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုခြင်းအတွက် ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်ပေါ်တွင် စစ်လေယာဉ်များ အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်း - Xinhua News Agency
CPC နှစ် ၁၀၀ ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုခြင်းအတွက် ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်ပေါ်တွင် စစ်လေယာဉ်များ အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်း
China News Politics, Law & Military မြန်မာ-ENG
ပုံစာ-တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တော် ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်တွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအတွက် “၁၀၀” ဟူသောစကားလုံးပုံစံဖြင့် ရဟတ်ယာဉ်များက ရင်ပြင်ပေါ်တွင် သရုပ်ပြပျံသန်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇူလိုင် ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုခြင်းအတွက် ဇူလိုင် ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်ပေါ်၌ စစ်လေယာဉ်များ အုပ်စုဖွဲ့ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
CPC ပါတီ၏ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မြောက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် “၁၀၀” ဟူသောပုံစံကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ပုံဖော်ကာ ပျံသန်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Military aircraft fly over Tian’anmen Square in echelons to mark CPC centenary
Source: Xinhua| 2021-07-01 07:58:16|Editor: huaxia
BEIJING, July 1 (Xinhua) — Military aircraft flew over Tian’anmen Square in echelons Thursday morning to mark the centenary of the Communist Party of China (CPC).
Helicopters flew in the formation of “100,” representing the 100 years of the Party. Enditem
Photo : 1- 14 – Helicopters fly over Tian’anmen Square in the formation of “100” ahead ofagrand gathering celebrating the Communist Party of China (CPC) centenary at Tian’anmen Square in Beijing, capital of China, July 1, 2021. (Xinhua/Yin Gang)
ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ သွေးသားဗီဇထဲတွင် ရန်လိုသော သို့မဟုတ် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးသော အမူအကျင့်များ သယ်ဆောင်ထားခြင်း မရှိကြောင်း ပြောကြား
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားကို ထျန်အန်းမင်ရင်ပြင်၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ